ရွာသားရဲ့ ဘာသာရေးဗဟုသုတ…(လွဲရင်လည်းလွဲတယ်မှတ်) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ရွာသားရဲ့ ဘာသာရေးဗဟုသုတ…(လွဲရင်လည်းလွဲတယ်မှတ်)
Posted by သုရှင် on Jun 6, 2012 in Copy/Paste | 12 comments
The Qur’an does provide permission for those who wish to marry
The Qur’an instructs that the maximum number of wives for a
under the care ofaman who has four wives He cannot, in that case,
marry her. But since
without recourse to marriage (It will also be the solution for her
ကိုယ့်ဟာကို လျှောက်ရေးထားတာ မဟုတ်ဘူးလို့သိရုံ ထည့်ထားတာပါ။ အပေါ်က စာတွေကို
ပြောပါတယ်။အဲဒီအထဲက တစ်ချို့ စာသားတွေက ကိုရ်ရမ်ကျမ်းမှာ ပါတဲ့ဟာတွေ ခင်ဗျ။
ကောင်းတယ်ဆိုးတယ် ကိုယ့်ဟာကိုယ် ဝေဖန်ကြပါ။ကျွန်တော်ကတော့ နှာစေးနေလို့။
ခိုင်ခိုင်မာမာ ပေါ့ဗျာ။ဒီလိုခင်ဗျ..အပေါ်က စာတွေရဲ့အဓိပ္ပါယ်က….
ပထမ ဆုံးအပိုဒ်က ။ ။
ကိုရ်ရမ် ကျမ်းက ကျွန်မ်ိန်းမ များကို လိင်မှုအလို့ငှာ ဆက်ရှက်
ချင်စိတ်ရှိသော သခင်အား ယူခွင့်ပြုထား၏။ပရောဖတ် ( မိုဟာမက် )
မိန့်ခဲ့သည်ကား “ ထိုသူသည် ကျွန်မိန်းမ များကိုပေါင်းသင်းခြင်းကြောင့်
ဆုလာဘ်( နှစ်ဆ ) ချသင့်၏။ကောင်းမွန်သော အမှုအရာ
ဖြင့်ဆက်ဆံခြင်းဖြင့်၎င်း၊ ထိုကျွန်မိန်းမ ၏ အသိပညာ တိုးပွါးရန်အတွက်၎င်း၊လွတ်လပ်
ခွင့်ပေးခြင်းဖြင့်၎င်း၊ပေါင်းသင်းပါက ဆုချီးမြင့်ခြင်း ( နှစ်ဆ ) ထိုက်တန်၏။ “
ဒုတိယ အပိုဒ်က။ ။
ကိုရ်ရမ် ကျမ်းက ခွင့်ပြုသည်ကား အလွန်ဆုံး ဇနီးမယား လေးဦးသာတည်း။သူတပါး
၏ လေးယောက်သော ဇနီးများတွင်ပါဝင်သောသူကို မူ မယူရ။သို့သော် ကျွန်မိန်းကကို
သားမယားအဖြစ်မဟုတ်ဘဲ လိင်အတွက်ကိုသာ( ထိုမိန်းမ ၏ ရမ္မက်ကို ဖြည့်ပေးသော အားဖြင့်)
ဖတ်ရင်း ဖတ်ရင်း နဲ့ ဘာမှန်းမသိလို့
လက်ရှိတစ်ယောက် နဲ့ ရုန်းကန်ရေသဗျ…
ခေါင်းခြောက်ရတဲ့အထဲ ကျမ်းစာသင်ကျောင်းထဲရောက်သွားတော့ ပိုဆိုးသွားေ၇ာ။
အစ္စလာမ်က ပြသသော လမ်းညွှန်မှုနဲ့ လွဲနေပါတယ်
ကုရ်အာန် ကျမ်းကို ဖျက်ထားသော စာသားများမြောက်များစွာရှိပါတယ်။
ဆိုလိုချင်တာက ဆူပူစေမယ့် အမုန်းပွားစေမယ့် ကိစ္စတွေကို အချိန်နဲ့ တပြေး ညီ တင်ပြနေတယ်လို့ပဲ ဆိုချင်ပါတယ်။တကယ်လို့ လေ့လာမှုကို ခိုင်မာစေချင်ရင် ကုန်အာန် ဘာသာပြန် ရှိပါတယ်မိတ်ဆွေ။
တဖက်သား ဘာသာကို ထိခိုက်နစ်နာ ဖတ်သူတွေ မုန်းတီးအထင်သေးမယ့် အလုပ်မျိုး မဖြစ်စေဖို့နဲ့
မသေချာပဲ မရေးပါနဲ့ လို့ တောင်းပန်ပါတယ်။
ဒီ အချိန်ဟာ အားလုံး သွေးပူနေကြတာပါ။ မီးလောင်ရာာ လေပင့် တဲ့ ပုံ စံမျိုး ဖြစ်နိုင်လို့
မေတ္တာရပ်ခံတာပါ။ကျွန်တော်တို့ ဆူပူမှုတွေ တဖက်နဲ့ တဖက် တိုက်ခိုက်မှုတွေ မဖြစ်စေချင်ပါဘူး
နောက် ဆရာတယောက် မန့်ထား သလို အရင် လိုလည်း ပြန် ပြီး အသိမ်း မခံရပါစေနဲ့ ဗျာ။
ဝေဖန်လိုတယ် ဆိုရင် နောက်မှပဲ ရိုးသားစွာ ဝေဖန်ပါလို့ ခင်ဗျားရေးပြတဲ့ စာအုပ်ရော
အကြောင်း အရာတွေ အစ္စလာမ်မှာ မရှိပါဘူး။
ကျွန်တော်တင်ပြတာ လွန်တယ်ဆိုလဲ နားလည် ခွင့်လွတ်ပါ ဗျာ။
မူရင်းကျမ်းရဲ့ စာမျက်နှာ တည်နေရာအတိကျမဖေါ်ပြပေးနိုင်ရင်
နဲနဲတော့ပြောကြည့်မယ်နော်…. စာမျက်နှာဘယ်လောက်…. အပိုဒ်ဘယ်လောက်မှာပါတာလဲဟင်….
ကိုရမ်ကျမ်းကိုဘာသာခြားတစ်ယောက်အနေနဲ. ဘာသာမပြန်နိုင်ပါဘူး…. အကိုကအတိအကျအမှားကြီးလာပြောနေတော့……. အံသြလို့ပါ… .ကျနော်ရှာမတွေ့ပါဘူး… ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျနော်ကတအုပ်လုံးအလွတ်၇လို့ပါဗျာ. အဲ.လိုဆုံးမထားတာမျိုးမရှိပါခင်ဗျာ.. တူတာလဲလုံးဝမရှိပါ…. .မိန်းကလေးနဲ.အားနည်းသူများကိုစောင့်ရှောက်ရမယ်လို့သာဆုံးမထားပါတယ်ခင်ဗျာ… .နောက်တစ်ခုက… မိန်းမများများယူတဲ.ကိစ္စ… အားလုံးနားလည်မှူလွဲနေပါတယ်… .၄ယောက်ယူချင်ရင်တောင်မှ၎ယောက်လုံးကိုတပြေးညီအခွင့်အရေးပေးနိုင်မှယူခွင့်ရှိတာပါ… တစ်ယောက်ကိုဒါဆင်ရင်နောက်တယောက်ကို ဒါထက်မလျော့ရပါဘူး… အဲ.လောက်အထိအသေးစိတ်ပါပါတယ်….. ခိုးကြောင်ခိုးဝှက်မလုပ်စေချင်တဲ.သဘောနဲ. အတိအကျအလွန်ဆုံးအတိုင်းအတာ သတ်မှတ်ပေးပြီးလမ်းညွန်ထားတာပါ…. .နောက်ပြီးလူမျိုးတိုင်းဘာသာတိုင်းမှာ… မယားပြိုင်ထားကြတာအားလုံးအသိပါ…… မသိရင်မတိကျရင်…. မဟုတ်တာကိုတလွဲမပြောစေချင်ပါခင်ဗျာ.. ကိုယ်ရေးလိုက်တဲ. စာကြောင့်သမိုင်းကြောင်းပြောင်းသွားနိုင်ပါတယ် …နောက်ပြီးအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်မဟုတ်သူများကိုသတ်ပစ်ရမယ်လို့လုံးဝမပါပါ…. .နောက်ပြီးဘာသာခြားမ်ိန်းမကို ယူနိုင်ရင်ဆုချတယ်ဆိုတာ ဘယ်သူပါးစပ်ဆော့ပြီးပြောတယ်မသိပါ…. ဆုချဖို့နေနေသာသာ… မယူဖို့တောင်တားမြစ်ထားပါတယ်… ဘာလို့လဲဆိုတော့… .မဖြေရှင်းနိုင်တဲ.အခုလိုပြဿနာတွေပေါ်လာမှာဆိုးလို့ပါ….
just for ur information…. sorry for bother u ….Mr.Kyaw KyiKo
Pls admin …dont let all the post shown up especially that kind of tabloits and dont let the audience gets wrong info;
ကျွန်ုပ်တို့မြို့ရွာမှာလဲ ဘာသာထဲမှာမပါဘဲ ဘာသာရေးနဲပြသနာဖန်တီးသူတွေကိုအရေးယူဖို့
ရွာထဲလာပြီး.. ပထမဆုံးပို့စ်တင်တာ.. ဝေေ၀၀ါးဝါး.. ဘယ်က..ဘာစာကူးမှန်မသိ..
အပေါ်ကပို့စ်ထဲရေးထားတာမျိုး.. မြန်မာမြေရှင်ပဒေသရာဇ်ခေတ်က.. .. မြို့စားလောက်ကတင်.. အသာလေး.. အေးဆေး..
မောင်းမ.. ကိုယ်လုပ်တော်ဆိုတာ… လိုင်စင်မယူပဲ/မရပဲ. လိင်ဆက်ဆံခံရသူတွေခေါ်တာ..ဟဲ့..
အထက် ပါအ ကြောင်း အ ရာနဲ့တော့ဘာမှတော့မဆိုင်။ဒါပေ မဲ့မဆီမဆိုင် မန်းလေးဂေဇက်ကို ဆွဲထည့်ထားသည်။တဂျီးရေလုပ် ပါအုံး ။link http://moemaka.com/2012/06/than-soe-hlaing-%E1%80%9C%E1%80%B0%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AD%E1%80%B3%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%9B%E1%80%B8-%E1%80%BB%E1%80%95%E1%82%86%E1%80%94%E1%80%AC%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF-%E1%80%98%E1%80%9A/
tအတော့်ကို အနစ်နာခံပေးသူ ကျေးဇူးရှင်ဂျီးဒွေဗဲ…